Kaddib Markii uu Luka Modric diiday inuu bixiyo Lambarkiisa 10-aad, labada Lambar ee uu Eden Hazard u xiran karo Real Madrid oo la sii shaaciyey – Gool FM
(Madrid) 17 Juunyo 2019. Khamiistii aynu ka soo gudubnay waxaa la soo bandhigay Eden Hazard, isagoo xiddig kooxda Real Madrid ah, waxaana garoonka Santiago Bernabéu soo bandhigistiisa u soo xaadiray 50,000 oo taageerayaal ah.
Waxaa la isku raacay in halka sheey ee ka maqnaa soo bandhigista Eden Hazard ay ahayd lambarka uu u xiran doono kooxdiisa cusub ee Real Madrid.
Markii la soo bandhigay xiddiga xulka qaranka Belgium ayaa xirnaa maaliyad cad oo Real Madrid ah, taasoo ay dusha kaga qornayd magaciisa oo far dahabi ah ku qoran, balse aan wax lambar ah lahayn.
Eden Hazard ayaa markii la soo bandhigay kaddib waxa uu shaaciyey inuu isku dayey inuu helo lambarka 10-aad ee kooxda Real Madrid, kaasoo uu haatan u xirto naadiga Los Blancos xiddiga ugu fiican adduunka wakhtigan ee Luka Modric.
Maadaama uu Hazard u xirnaa lambarka 10-aad kooxda Chelsea oo uu ka soo wareegay waxa uu xusay inuu Mateo Kovacic u maray Luka Modric oo uu waydiistay lambarka 10-aad, balse xiddiga xulka qaranka Croatia uu iska diiday sheekadaas, isla markaana uu u sheegay Eden inuu raadsado lambar kale.
Yeelkeede kooxaha reer Spain ayaa waxa ay caan ku yihiin in ciyaartoyda kooxdooda koowaad ay siiyaan lambarro u dhexeeya 1 illaa 25, taasoo la micno ah in labada lambar ee iminka ka bannaan kooxda Real Madrid ay kala yihiin 13 iyo 16.
Laakiin haadaashu uma badna in midkoodna labadaas lambar uu xiran doon Eden Hazard xilli ciyaareedka soo aaddan, balse waxaa la shaaciyey labada lambar ee lafahamsan yahay inuu midkood xiran doono Hazard.
Midka koowaad ee la filayo in Hazard uu xiran doono ayaa ah lambarka 11-aad ee uu haatan kooxda Real Madrid u xirto Gareth Bale, iyadoo xiddiga xulka qaranka Wales la la xiriirinayo inuu xagaagan kooxda isaga tagi doono.
Lambarka labaad ahna kan ugu macquulsan oo uu Eden Hazard xiran karo waa lambarka 7-aad, kaasoo uu kooxda u xiran jiray Cristiano Ronaldo oo ku biiray Juventus, horayna uu u soo xirtay halyeyga kooxda Real Madrid ee Raul.
Hayeeshee, lambarkaas 7-aad waxaa haatan xiran Mariano Diaz, balse waxaa la filayaa inay Real Madrid ka qaadi doono oo ay ku wareejin doono Eden Hazard, waxaana suuro-gal ah in xagaagan amaah lagu diro Mariano.